Warshad Pumphead - Shiinaha Soosaarayaasha Pumphead, Alaab-qeybiyeyaal
Qaabka: YZ35 taxane Calaamadee ● Qalabkeedu waa PSU oo leh waxqabad xasiloon iyo heerkul caabbinta heerkulka sare (150 ° C) acid Aashitada adkaysi leh, soodhaha, laakiin aan ahayn dareeraha dabiiciga ah parts Qaybaha birta gudaheeda waxaa laga sameeyaa 304 ahama stainless Rollers shaqeeya dusha sare ayaa la ballaadhiyay. si loo yareeyo shiidida tuubada, loona wanaajiyo nolosha tuubbooyinka Halbeegyada Farsamada Model Tijaabada la heli karo Qiyaasta socodka socodka （ml / min） Xawaaraha xawaaraha （rpm） Waxyaabaha wax lagu rito ee wax duuban Rollers MAYA. miisaan ...
Hoos udhaca DMD15
Qiyaasta ugu badan ee socodka ： 2070ml / min 1 Garaaca wadnaha, daawada sare 2.Qibrad gaar u leh bixinta saxda ah iyo qulqulka qulqulka qulqulka yar ee guryaha 3.PPS, waxay istaagi kartaa aashitada, alkali, iyo dareeraha orangic Double Double-magdhawga cadaadiska si loo yareeyo Qulqulka wax ku oolka ah iyo saxsanaanta ayaa la hagaajiyay miiska Farsamada Model Model Roller wax rullaluistemadka tirada guryaha qalabka xawaaraha ku habboon tubbada ugu badan ee socodka socodka ml / min Baadi soo noqnoqday Miisaanka (kg) DMD15-2A 304 ahama st ...
Mashiinka Culayska Degdega ah KZ35
Heerka qulqulka ugu badan: 11000ml / min Laga sameeyay birta birta ah ee birta loo isticmaalo si buuxda u adeegso Bixi laba nooc oo ah qaabka tubbada haynta, haynta ama habeynta Hordhac Madaxa bamka KZ35 wuxuu ka samaysan yahay 304 bir bir ah oo aan lahayn. Waxaa si gaar ah loogu talagalay loona soo saaray warshadaha dawooyinka iyo cuntada sida ku cad shuruudaha GMP. Sidoo kale wuxuu leeyahay astaamaha qulqulka ballaaran, hawlgal xasilloon oo la isku halleyn karo, iska caabbinta daxalka, isla mar ahaantaana sida waafaqsan baahiyaha isticmaalaha, madaxyada mashiinnada ayaa la is dulsaaran karaa. Astaamaha ● Acce ...
Mashiinka Xawliga Degdega ah KZ25
Xawaaraha ugu badan ee socodka: 6000ml / min Hordhac Marka madaxa bamka KZ25-1A uu isla tubbada ku hagaajinayo YZ25-1A, waxay ku siin kartaa xaddiga socodka labalaabka ah marka loo eego YZ25-1A Siinta laba nooc oo ah qaabka haynta tuubada: Qabsashada ama dhejinta. KZ25-1A waxay korsatay 304 rollers ahama iyo PC ridaya. Marka waxay siineysaa hawlgal muuqda Isugeynta isku-darka PPS waxay leedahay Is-saliidayn si loo yareeyo xirashada tubada Qalafsanaanta wanaagsan ee cabbirka xasilloon Iswaafajinta kiimikada ee aadka u fiican iyo kuleylka u adkaysta. Dabeecad ● Khariidadaha iyo salka ayaa ...
Qiyaasta socodka ugu badan: 248ml / min at 150rpm Waxyaabaha qulqulka hooseeya sare, madaxa bamka raqiiska ah ee hufan ee hufan si loo hubiyo heerka shaqada ee si fudud isafgarad iyo fiicnaan leh, ayaa lagu dhejin karaa saxanka kaliya ama gudiga inta badan loo isticmaalo OEM dalabyada Cabbiraadda Habka Tuubooyinka habboon ml / min Qalabka xawaaraha gawaarida gawaarida gawaarida Qalabka guryaha Qalabka lambarada JY15-1A 13 #, 14 #, 19 #, 16 #, 25 #, 17 # 248 ≤150 POM PPS 2/4
xaddiga socodka ugu badan: 2200ml / min Model: YZ15 / 25 taxane Isticmaal shaybaar naqshadaysan, madax bamka la isku dulsaarayo Dabeecad ● Qalabkeedu waa PSU oo leh waxqabad xasiloon iyo heerkulka heerkulka sareeya (150 ° C) acid Astaamaha u adkaysta, soodhaha, laakiin aan ahayn dareeraha dabiiciga Parts Qaybaha birta ah gudaheeda waxaa laga sameeyaa 304 ahama stainless Rullaluistemadka dusha sare ka shaqeynaya ayaa la ballaariyay si loo yareeyo qashin-qubka tuubada, waxayna kor u qaadday nolosha tuubbada Tilmaamaha Farsamooyinka Qaab Tilmaameedka Laga Heli Karo Max flow ml / min） ...
DG madaxyada bamka taxanaha ah waxaa loogu talagalay heerarka socodka micro, wareejinta dareeraha badan ee kanaalka iyo keenista saxan sare. Si fudud loo beddelo loona hagaajiyo tubbada. Qalabka kicinta iyo jiirka ayaa la hagaajiyay si ay u yeeshaan shaqeyn ka fiican. Isticmaalayaashu si fudud ayey u hagaajin karaan una beddeli karaan tubbada. Dabeecadda lusion Gaaritaanku waxyar ayaa lagu hagaajin karaa wheel ratchet si uu ugu habboonaado shuruudaha dhumucda darbiga tubbada kala duwan 6-rollers ayaa madaxa saaraya heerka socodka badan. 10-rollers waxay yareeyaan garaaca wadnaha iyo qulqulka socodka waxyar. Skillfu ...
Badeecadani hadda si ballaaran ayaa loo isticmaalaa madaxa bamka caadiga ah, rollers waxaa laga sameeyaa bir bir ah ama PET-TX, dahaarka waxaa laga sameeyaa PC Madaxa mashiinka oo dhami waa mid cad oo hufan. Way u fududahay isticmaaluhu inuu ilaaliyo hawlgalka Dabeecadda Dabeecadda ● Crystal cad, garaaca wadnaha oo hooseeya operation Hawlgal xasilloon iyo mid la adkeyn karo size Cabbirka is haysta cabirrada Model Availab ...